वामगठबन्धनले किन लोकतन्त्र धरापमा पर्छ कांग्रेस ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नेपालको राजनीतिमा असोज १७ एउटा ऐतिहासिक दिन सावित भएको छ। लामो समय देखि देशले खोजेको कम्युनिष्टहरुको एउटै पार्टी बनाउने सपनाको प्रस्थान भएको छ। असोज १७ गठबन्धन मन पर्ने र नपर्नेका लागि समेत ऐतिहासिक दिन सावित भएको छ। एमाले माओवादी र नयाँ शक्तिबीच भएको ऐतिहासिक सहमतिले नेपालको राजनीतिमा नयाँं तरङ्ग ल्याएको छ । यो गठबन्धन पछि कहिल्यै प्रजतान्त्रिक शक्तिबीच एकताको कुरा नगर्ने नेपाली कांग्रेसले त्यसको शूरुवात गरेको छ ।
पार्टी जति बिभाजित हु्दै जान्छ त्यति नै मुलुक र लोकतन्त्र माथि खतरा हुर्दै जान्छ। पार्टी खोल्ने नाउमा चोकै पिच्छे नाङले पसल खोल्ने जस्तो कुराले लोकतन्त्रमा बिकृति ल्याउछ। गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवारको उचित ब्यत्रस्थापन नहुदा पार्टीको संख्या गन्न क्यल्कुलेटर मेसिन नै आवश्यकता पर्ने जस्तो भएको थियो। मंगलबारको सहमतिले यसलाई न्यूनिकरण गर्न मद्त मिल्छ भन्ने आम आशा रहेको छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँं शक्ति पार्टीबीच सहमति भएपछि बालुवाटार र दक्षिण तिर समेत ८ रेक्टरको भुईचालो गएको छ। मंगलबार बेलुका बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले यो गठबन्धनले लोकतन्त्र माथिको खतराको संकेत भनि हास्यस्पद टिप्पणी गरेको छ। जनताले नेपाली कांँंग्रेस सगै सिधै जवाफ माग्ने छन यो गठबन्धनले कसरी लोकतन्त्र माथिको संकट ल्याउछ? । के लोकतन्त्रको लालपुर्जा कांग्रेसको खल्तीमा छ ? कि उसका नाउमा कतैबाट प्राप्त गरेको बकस पत्र हो। २०४६ सालमा पंचायत विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बेलामा बनेको बाम मोर्चाले लोकतन्त्रमा संकट ल्यायो कि लोकतन्त्र ल्यायो? २०६२ सालमा बामपन्थि शक्तिहरुको अगुवाईमा लोकतन्त्र ल्याएको होइन? अनि कसरी लोकतन्त्र संकटमा पर्यो ।
यो गठबन्धनले लोकतन्त्र संकटमा होइन नेपाली कांग्रेस संकटमा परेको छ। २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको भोटको गणना गर्दा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको अन्तर एक हजार औसतमा छ । अव माओवादीसंग तालमेल भएको खण्डमा ती सबै क्षेत्र नेपाली कांग्रेसले गुमाउनु पर्ने छ। त्यसै कारण नेपाली कांगूेस भन्दै छ यो गठबन्धनले लोकतन्त्रमा खतरा उत्पन्न गराउछ ।